Ndeapi mutero data | Ehupfumi Zvemari
Encarni Arcoya | 30/09/2021 16:57 | Yakagadziridzwa ku 30/09/2021 17:00 | General hupfumi
Kufunga nezve Treasure pamwe neSocial Security kune vazhinji inguva yekushushikana. Chokwadi chekuita chimwe chinhu chisina kunaka chinoreva masanctions uye ndizvo zvisinganyanyodiwa. Chimwe chezvinhu zvakakosha mumaitiro acho ndeaya data yemutero, asi ndezvipi?
Kana iyo pfungwa yemutero data isina kujeka kwauri uye iwe uchida kuziva zvaunofanira kufunga nezvazvo, saka tinokupa makiyi ese kuti iwe uanzwisise.
1 Chii chinonzi tax data
1.1 Mutero data remunhu
1.2 Mutero data rekambani
1.3 Mutero data mune yekubhadharira vs mutero
2 Ndeipi data yemutero?
3 Ungazviwana sei
3.1 Matanho ekuvachinja kuHaimari
4 Maitiro ekudhawunirodha data yemutero kubva makore apfuura
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuziva nezve data yemutero ndizvo chaizvo zvazviri. Vazhinji vanovasanganisa nedzimwe pfungwa uye ndosaka tichida kujekesa pfungwa yavo kubva pakutanga.
Mune ino kesi, iyo data yemutero inogona kutsanangurwa se nhevedzano yeruzivo inogadzira munhu (yakazvimiririra, kambani) inogona kubhadharisa imwe. Mune mamwe mazwi, idzi idhata dzinozivisa munhu uye, panguva imwechete, dzinovagonesa kumashandisirwo akasiyana.
Mutero data remunhu
Uye ndezvekuti, kunyangwe iwe uri munhu chaiye, ivo zvakare vane data, iro rinotora mari, zvinhu nekero yemutero yemunhu kunyangwe asiri kuzoita invoice muhupenyu hwake.
Mutero data rekambani
Iwe unofanirwa kuziva kuti iwo emakambani akasiyana zvakanyanya neayo "akajairwa" iwo. Kutanga, iyo NIF yekambani haizove iyo yemutungamiri kana munhu anozvishandira, asi kuti iyo kambani ichave neyayo. Uye zvakare, mune iwo emakambani pane tsamba pamberi pavo, inoratidza mhando yechiitiko chavanoshandira.
Imwe poindi yakakosha yeiyi data ndeyekuti, kusiyana neakapfuura aya, data remutero rekambani rinofanirwa kukumbirwa.
Mutero data mune yekubhadharira vs mutero
Iye zvino zvaunoziva iwo pfungwa yekuti ndeyipi mutero data iyo yaunofanirwa kunge uri, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvirevo zviviri zvakasiyana. Kunyangwe iyo yatakakurukura ndiyo yakajairwa, muchokwadi pane pfungwa mbiri dzakasiyana zvichienderana nekuti dzinoreva kubhadhara mutero kana data remutero.
ari data rekubhadhara mutero rinoreva kune vese avo vanozivisa data izvo zvinofanirwa kuiswa kuitira kuti ukwanise invoice, kungave sekambani kana sehunyanzvi. Ndokunge, zita uye zita, zita rekambani, NIF, kero ...
Kune rimwe divi, isu tinenge tine iyo data yemutero, iyo kunyangwe zvazvo ichiwanzo fanika sezvatambotaura, chaizvo nekuda kwemitero inofungidzirwa neimwe nzira, sekuzivisa data rinoshanda kuziva muteresi uye kumuziva paanofaira mitero. Mune ino kesi, haingoshandire ma freelancers nemakambani chete, asiwo nevanhu chaivo.
Ndeipi data yemutero?
Iye zvino ngatitaurei nezve kukosha kwedata. Zviripachena, kubva pane izvo zvatakaona, kuti kune data remutero kune vanhu, kune vanozvimiririra uye kumakambani. Asi imwe neimwe ine musiyano wekushandisa.
Kana vari vanhu chaivo, havazoburitse ma invoice uye havazoshanda sevanoshanda vakazvimirira (kunze kwekunge vazodaro pakupedzisira). Asi iyo yemutero data kusvika ipapo ivo vanongoshanda chete kuitira kuti Mutero Wemitero, ndiko kuti, Treasury, ive neese akakwana data. Uye izvi zvinoitwa kuburikidza neDhaimendi reImihoro Chirevo.
Kana iwe uri muzvinabhizimusi kana munhu anozvishandira, iko kutarisa kunotora imwe nzira, kubvira Izvo zvinoshandiswa kuburitsa ma invoice kune vamwe mahara, vanhu kana makambani. Nekudaro, izvi zvinofanirwa kuverengerwa mumavovovhoisi.
Mutero data inogona kubvunzurudzwa kuburikidza neDare Rezvemitero. Kunyanya, zvinokwanisika kuzviita kuburikidza newebsite, uchizvizivisa pachako kuburikidza nereferenzi nhamba, yemagetsi DNI, zvemagetsi chitupa kana PIN kodhi. Izvi zvichave zviripo mu "Featured maitirwo", uye unofanirwa kudzvanya pa "Tarisa zvako zvemitero".
Ipapo inokumbira kuisa iyo DNI kuti ikwanise kuwana nePIN kodhi kana neinongedzo nhamba. Asi iwe unogona zvakare kuzviita neimwe nzira mune iyi link.
Paunenge uchinge uri mukati unozokwanisa kubvunza iyo data inowoneka muTax Agency panguva iyoyo.
Pamusoro pewebhu webhusaiti, zvakare zvinokwanisika kubvunza iyo data kuburikidza neiyo Tax Agency application pane Android uye iOS. Izvi zvinongokutendera kuti uzviite kuburikidza nereferensi nhamba kana PIN kodhi.
Iwe zvakare une sarudzo yekurodha pasi iyi data, zvese pawebhu uye mune application. Kazhinji unogona kuzviita muPDF, nekuti ndiyo yakajairika fomati yeiyo Mutero Agency.
Matanho ekuvachinja kuHaimari
Asi, chii chinoitika kana tikaziva kuti Treasure ine yakaipa tax data? Ukasazvigadzirisa nenguva, unoisa panjodzi pachinhanho chekusave neyako data yakagadziridzwa. Mune ino kesi, kana iwe ukaona kukanganisa unofanirwa kuigadzirisa. Uye matanho aunotora kuti uchinje data yemutero ndeaya:
Enda kune webhusaiti yeiyo Tax Agency. Iwe unogona zvakare kuzviita iwe pachako, asi kazhinji zvinotora nguva yakareba. Pawebhu, semunhu, uchafanirwa kuzadza fomu 030, kunyanya "Kubvunza uye kugadzirisa kero yemutero uye kero yekuzivisa (Yangu dhata yekuverenga)".
Kuti uite izvi, iwe unozoda chitupa chemagetsi, PIN kodhi kana yemagetsi DNI.
Paunenge uchinge uri mukati unenge uine data rese iro Treasure rine nezvako. Asi iwe zvakare uchaona kuti kune maviri mabhatani, rimwe re "mimwe mibvunzo" uye iro ratiri kufarira, "Data Modification".
Rova izvi. uye submenu ichaonekwa. Dzimwe sarudzo dzichaonekwa asi idzo dzinotifadza ndidzo dzatakakurongera.
Mushure mekuchinja iyo data, iwe unenge uine humbowo hwemaitirwo uko iro zuva uye nguva iwe yawachinja iyo data ichave (kana iwe ukazogamuchira chero sanction).
Maitiro ekudhawunirodha data yemutero kubva makore apfuura
Mune zvimwe zviitiko unogona inoda kurodha pasi kubva kumakore apfuura. Izvi zviri nyore kwazvo kuita.
Pinda modhi zana.
Muchikamu chino iwe uchaona kuti iwe une chikamu «Zvekare kurovedza muviri». Uye, ipapo, "maIncome services".
Kamwe ipapo iwe unogona kurodha iwo kubva kumakore apfuura.
Ndidzo pfungwa dzedata remitero uye zvese zvavanosanganisa zviri pachena kwauri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi tax data